Iviki leMidlalo laseMilan 2015
Ngolunye uhlu lwamasonto abaluleke kunawo wonke wezemfashini yaseMilanese ithatha uhlu lwesithathu. Iviki leMfashini eMilan ngo-2015 laliyi-36 ngoba liqhutshwa kusukela ngo-1979. Umcimbi oqhakazile awuzange udlule ngaphandle kokushiya umkhondo, unikeze abesifazane abathandwayo kuwo wonke amathrendi womhlaba, okuyinto esizoxoxa ngayo ngokubukeza amaqoqo abaluleke kakhulu embukisweni wezemidlalo eMilan ngenkathi yonyaka kahlobo kahlobo kahlobo.
Iqoqo leDolce & Gabbana limangazwe ngobuningi be-motifs yaseSpain. Izingubo zokugqoka, izindwangu, izindwangu kanye nezindwangu zihlotshiswe ngamatshe angaphezulu, ukuhlobisa, izimbali, i-lace. Imibala ehamba phambili - emnyama, ebomvu nebomhlophe, futhi phakathi kwezingcaphuno, abadwebi banikeza i-peas zakudala.
Iqoqo lika- Emilio Pucci liwuhlobo lomfazi oluthinta izingubo zokukhanya eziphansi phansi nge-antisymmetric hem, iziketi ngezintambo, i-pantyli ebanzi kanye nezingubo ezingavamile. Zizwe ithonya lemfashini yamashumi ayisikhombisa, njengoba abashicileli bezinyathelisi basebenzisa i-psychedelic, futhi ekuhlotsheni kulula ukuqagela ukukhangwa kwe-hippies.
Ukuqoqwa kukaRoberto Cavalli sekuyisibonelo sobuhle nobuhlobo. Ukubheka abadwebi bama-dressers basebenzisa ama-air chiffon ngama-prints exotic flower. Amamodeli amafushane anenqwaba ye-A-shaped silhouette, futhi e-trouser-cargos, ehlotshiswe ngamatshe ne-lace, akunakwenzeka ukuba ahlale engabonakali!
Iqoqo le-Giorgio Armani lizobheka abathandi be-shades obucayi futhi cishe ukuntuleka kokuhlobisa okuphelele. Abadwebi baphefumulelwe ama-seascapes, umhlaba wamanzi nokushona kwelanga. Mhlawumbe uzothanda ukuhlolwa kokudala - inhlanganisela yamabhulu ane skirt ebonakalayo? Noma izikhwama zezinwele zombala weqhwa zizokwenza uphuphe ngokufika kwehlobo?
Iqoqo le-Bottega Veneta lenzelwe amantombazane asebenzayo abafuna ukubukeka ngendlela ehlelekile, kodwa angakulungeli ukuchitha isikhathi sokufuna izitayela ezenziwe ngemfashini. Ukwenza okulula kwe-Laconic kuhlanganiswe nokuyinkimbinkimbi nobuhle. Kudala umuzwa wokuthi iqoqo lenziwe ukuphumula. Imibala engabonakali, inqwaba ye-denim, ikheji elifashisayo - ukukhetha kubanzi ngokwanele.
Iqoqo i-Versace , mhlawumbe, ekhanyayo futhi enamandla kunazo zonke ngesikhathi sehlobo sasehlobo. Abaqambi abakhonanga imibala, besebenzisa amhlophe, abomvu, ama-orange, imibala eluhlaza okwesibhakabhaka. Isikhala esimnyama kuqoqo sasitholakali lutho. Ngenxa yokushicilela okucebile, ithuba lokuhlala emthunzini yi-zero.
Izingubo zika-Oksana Mucha
I-Nike Running Shoes 2013
Izitayela zeSkirt 2015
Amabhantshi amafashini namajezi 2014
Isitayela se-Office 2014
Ngabe ubude be skirt buhamba kanjani ngo-2014?
Izingubo zesiNgisi nezesekeli
Izindwangu eziphansi ze-Heel 2013
Izingubo - Spring 2015
Amajajethi namajazi awela ngo-2013
Izembatho zansuku zonke - fashion ehlobo 2016
Imibala ye-nail polish 2013
Ukuguquka kwesisu ngesikhathi sokukhulelwa ngesikhathi esilandelayo
Izimpawu zabesifazane abakhulelwe
Umdlali kaBrithney Spears wesaba ukuthi uzofa ngesikhathi sekhonsathini
Isinkwa se-Lenten kuhhavini
Ingabe i-hamster ikhabe?
UBrooklyn Beckham wagubha usuku lokuzalwa kuka-16 oluthandayo lwakhe eDisneyland
Flatulence ezisanda kuzalwa
Izingubo ezigqoke izigqoko
Kanjani kahle ukugcina uju?
Ingabe i-angina ingenakuvuthwa?
Izingubo zesitayela zesiJapan
Indlela yokukhulelwa intombazane - izindlela eziyikhulu ezingamaphesenti
Uphahla lwama-gypsum cornice
Yini indlu yangasese ibukeka ngayo?
Ikhekhe le-puff ne-anyanisi
Dish for izithelo
Indlela yokuvikela inja kusuka kumakhiza?
Isithombe seThabynskaya sikaMama kaNkulunkulu sisisiza kanjani?